ZTE lanza los Blade Max View y Blade Max 2s en Estados Unidos | Androidsis
I-ZTE ibuyele kwimarike yase-US ngezixhobo ezimbini ezintsha, iBlade Max View kunye neBlade Max 2s. Inkampani yaseTshayina yavalwa eUnited States emva kokophula imigaqo ethile yokhuseleko, njengoko bekuxeliwe ngaphambili.
Kutshanje, iZTE kunye norhulumente waseUnited States bafikelele kwi isivumelwano sokususa isibhengezo. Ekugqibeleni ngoku uphawu lwaseTshayina luzise izixhobo esele zikhankanyiwe.
1 Ukujonga kweZTE Blade Max
2 I-ZTE Blade Max 2s
3 Amaxabiso kunye nokufumaneka kweefowuni zombini
Ukujonga kweZTE Blade Max
Zombini iiterminal zinomdibaniso weenkcukacha ezifanelekileyo ngexabiso elifanelekileyo. Ngokuyintloko, i-ZTE Blade Max View ixhobisa i-18-intshi ye-9: 6 FHD + isikrini kwaye iphethe i-chipset ye-Snapdragon 435 kunye ne-3GB ye-RAM. Inememori yangaphakathi ye-32 GB, eyandisiweyo kunye nebhetri ye-4.000 mAh. Ukongeza, inika ikhamera ye-16 kunye ne-2 megapixel ngasemva, ngelixa ikhamera ye-8 megapixel yangaphambili ifumaneka kwi-selfies. Ukongeza koku, inenkqubo yesandi ezimbini zeDolby evumela abathengi ukuba bonwabele iaudiyo ephezulu.
I-ZTE Blade Max 2s
Ngakolunye uhlangothi, I-ZTE Blade Max 2s nayo inescreen se-6-intshi efanayo ngenkxaso ye-FullHD + (18: 9) kunye ne-chipset efanayo ye-Snapdragon 435. Kwakhona, isebenzisa i-2GB RAM kunye ne-32GB yokugcina kwangaphakathi. Nokuba amandla ayo ebhetri ahlala ngokufanayo kwi-4.000 mAh. Kwisebe lekhamera, kukho kuphela inzwa ye-13-megapixel ngasemva kunye ne-5-megapixel ngaphambili. Inesithethi seDolby yesandi DS1 yesandi esicacileyo nesinamandla.
Amaxabiso kunye nokufumaneka kweefowuni zombini
I-ZTE Blade Max 2s iya kufumaneka kuzo zonke izinto eziphambili ze-GSM, ezinje nge-AT & T, T-Mobile kunye nezinye iinethiwekhi ezinje ngeSprint, ngexabiso lokuqala le- $ 180 (~ 1.200 yuan okanye i-155 euros). Ngokuchaseneyo, i-ZTE Max View iyahambelana kuphela neVerizon kwaye iyafumaneka ngexabiso lama-199 eedola (~ 1.380 yuan okanye kwi-euro ezingama-170). Zombini zinokuthengwa nge- iphepha elisemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » ZTE » I-ZTE ingena kwakhona eUnited States, ngeli xesha, kunye neBlade Max View kunye neBlade Max 2s